राति सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. राति सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा सिरानीमा राखेर सुत्नुस्, हुनेछ यस्तो फाइदा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
राति निन्द्रा नलाग्ने स’मस्याबाट तपाई पी’डित हुनुहुन्छ रु पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु यस्तो स’मस्या लिएर चिकित्सककहाँ पनि पुग्ने गरेका छन् । व्यस्त जीवनशैली, त’नाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने स’मस्या रहेका छन् ।
हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, त्रास र अहं’कार हट्छ भने सपना समेत राम्रो देखिन्छ ।
भुत–प्रेत, ऐठन हुने स’मस्या छ भने राति सुत्नेबेला सिरानमुनि फलामको कुनै चिज राखेर सुत्नु उपयुक्त मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । बालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण रहेको पाइन्छ । बालबालिका सुत्ने खाटको सिरानमुनि फलामबाट बनेका चिजहरु राखेपनि धार भएका वस्तुहरु राख्नु हुँदैन ।
सिरानी मुनी राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलि’ङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको May 17, 2021 May 17, 2021 115 Viewed